Sarkal sare oo ka tirsanaa Al-shabaab oo Ka Baxsaday Xabsi ku yaala dalka Uganda - Awdinle Online
Sarkal sare oo ka tirsanaa Al-shabaab oo Ka Baxsaday Xabsi ku yaala dalka Uganda
February 5 , 2020 (Awdinle Online) –Sida ay qortay “The Daily Monitor” ee dalka Uganda, Cabdi Qaadir Maxamed Maxamuud Sandir oo horay loogu tuhunsanaa ka mid ahaanshiyaha Al-shabaab ayaa la sheegayaa inuu ka baxsaday xabsi ku yaalla magaalada.
Ninkan oo ka tirsan hoggaamiyeyaasha kooxda ku sugan koonfurta Soomaaliya ayaa isaga iyo shan kale oo Soomaali ahaa waxaa lagu eedeeyey 2014-kii, in ay ku lug lahaayeen weeraro lala damacsanaa in lagu qaado xarunta baarlamaanka dalkaasi, Oasis Mall, Makerere University iyo meelo kale oo muhiim ah oo ku yaalo bartamaha Kampala.
Sida ay sheegeen booliiska, Cabdi Qaadir Maxamed Maxamuud waxaa uu ka baxsaday goobtii uu ku xirnaa 10 maalmood ka hor.
Booliiska ayaa ku xiray goob qarsoodi ah tan iyo markii dib loo qabtay 2018-kii, kadib markii maxkamadda sare ay isaga iyo dadkii la socday dambiyo ku weysay.
Wararka waxaa ay intaasi ku darayaan in booliiska ay ku daba joogaan, iyaga oo bilaabay iney dadka qaar su’aalo weydiiyaan.
Previous articleAkhriiso :-Coronavirus oo Magac cusub oo loo bixinayo
Next articleKhilaafkii u dhaxeeyay Dowladda Iyo Maamulka Isbitaal Yardimeli oo xal loo la yahay